कसरी आईफोन १२ मा सटीक ब्याट्री प्रतिशत देखाउन? - ग्याजेटहरू
कसरी आईफोन १२ मा सटीक ब्याट्री प्रतिशत देखाउन?
यदि तपाइँ नयाँ आईफोन १२ श्रृंखला प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँले याद गर्नु भएको छ कि ब्याट्री आइकनले बाँकी रहेको ब्याट्रीको सटीक प्रतिशत देखाउँदैन। आईफोनको अघिल्लो मोडेलहरूमा, ब्याट्रीको बाँकी प्रतिशत ब्याट्री आइकनको साथ शीर्ष दायाँ कुनामा देख्न सकिन्छ। त्यसोभए आज हामी आईफोन १२ मा कसरी ब्याट्री प्रतिशत देखाउने भनेर हेर्नेछौं।
जे होस् नयाँ आईफोन १२ सीरिजमा सब भन्दा राम्रो आईफोन स्पेसिफिकेसन छ, एप्पलले फोनको केहि आधारभूत कार्यहरूमा परिवर्तन गरेको छ। एप्पल द्वारा यो नयाँ अद्यावधिक निश्चित ज्यादै चिन्तित छ किनकि ब्याट्री प्रतिशत निरन्तर जाँच धेरैको लागि एक बानी हो। यद्यपि ब्याट्री स्थिति देख्न सकिन्छ, यो प्रतिशतको जस्तो छैन। सेटिंग्स परिवर्तन गर्दा यस केसमा सहयोग गर्दैन। यस समस्याको लागि केहि विकल्पहरू छन्। तर तपाइँलाई अगाडि चेतावनी दिन ब्याट्री प्रतिशत स्थिति पट्टीमा देखाउन सकिदैन। यसको सट्टामा, त्यहाँ विकल्पहरू छन् जुन तपाईं रिसोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
अन्य आईफोन १२ गाईडहरू:
नक्कली आईफोन १२ लाई कसरी चिन्ने?
आईफोन १२ का लागि सर्वश्रेष्ठ हेडफोन
आईफोन १२, मिनी र प्रो अधिकतम मा ब्याट्री प्रतिशत देखाउन बिभिन्न तरिकाहरू:
१. नियन्त्रण केन्द्र मार्फत ब्याट्री जाँच गर्नका लागि चरणहरू
गृह स्क्रिनमा पछाडि नफर्किएर बाँकी रहेको ब्याट्री जाँच गर्न सबैभन्दा सजीलो पहुँच विकल्प नियन्त्रण केन्द्र हो। व्यक्तिहरूको लागि जो आफ्नो फोनको ब्याट्री जाँच्दैछन्, नियन्त्रण केन्द्र खोल्नु नै उत्तम विकल्प हो
तपाईको आईफोनको माथि दायाँ कुनाबाट तल स्वाइप गर्नुहोस्।
जब नियन्त्रण केन्द्र खुल्छ तपाईं अन्य आईकनहरूसँग माथि दायाँमा ब्याट्री प्रतिशत देख्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं नियन्त्रण केन्द्रमा पहुँच गर्न चाहानुहुन्छ भने, अझ बढि सजिलो वा तपाईं प्रत्येक पटक स्क्रोल भइरहेको जस्तो महसुस गर्नुहुन्छ जतिखेर समय जटिल भएको छ जाँच गर्नुहोस्, तपाईं सेटि the मेनूमा एउटा गेस्चर थप्न सक्नुहुन्छ ताकि कन्ट्रोल सेन्टर साधारण ईशाराको साथ खुल्छ। ।
सेटिंग्स मेनूमा जानुहोस्, पहुँच गर्न तल स्क्रोल गर्नुहोस् र 'टच' विकल्पमा जानुहोस्
तल, त्यहाँ एक विकल्प छ 'ब्याक शीर्ष'। त्यसमा ट्याप गर्नुहोस्
अब तपाईं इशारा 'डबल ट्याप' वा 'ट्रिपल ट्याप' को रूपमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईले चाहानु भएको विकल्प छान्नुहोस्
नयाँ इशारा सेट गरेर, तपाईं नियन्त्रण केन्द्र खोल्न सक्नुहुनेछ 'डबल ट्याप' द्वारा जब तपाईं ब्याट्री प्रतिशत जाँच गर्न चाहानुहुन्छ वा अरू केही पनि। यस इशारा केवल होम स्क्रिनबाट मात्र पहुँच गर्न आवश्यक पर्दैन। जब तपाई डबल ट्याप गर्नुहुन्छ, नियन्त्रण केन्द्र पप अप हुन्छ।
२. सिरिबाट मद्दत सोध्नुहोस्
सिरी, तपाईको भर्चुअल सहायक तपाईलाई तात्कालिक सहयोगी हुन सक्छ। सेटिंग्स मेनूमा 'हे सुरीका लागि सुन्नुहोस्' विकल्प सेट गर्नुहोस् यदि तपाईं प्रत्येक पटक सिरीसँग कुरा गर्दा साइड साइड बटन थिच्न चाहनुहुन्न भने। त्यसैले बाँकी ब्याट्री प्रतिशत जाँच गर्न सिरीलाई सोध्नु पर्ने चरणहरू छन्
थिच्नुहोस्d साइड बटन होल्ड गर्नुहोस् सिरी सक्रिय गर्न र बाँकी रहेको ब्याट्री जाँच गर्न सोध्नुहोस्
भन्नुहोस् 'हे सिरी' सिरी सक्रिय गर्न र ब्याट्री प्रतिशत जाँच गर्नुहोस्
जति सरल र सजिलो देखिन्छ, यो विकल्प सबै परिस्थितिहरूको लागि उपयुक्त छैन। प्रत्येक पटक सिरी सक्रिय गर्नु जब तपाई समय जाँच गर्न चाहानुहुन्छ उत्तम विकल्प होईन।
Home. होम स्क्रिन विजेट मार्फत
यदि तपाईं आफ्नो आईफोन खोल्ने बित्तिकै आफ्नो ब्याट्री प्रतिशत जान्न चाहानुहुन्छ भने तपाईको लागि उत्तम विकल्प भनेको होम स्क्रिन विजेट थप गर्नु हो। नयाँ आईओएस १ update अपडेटको साथ, तपाईं आफ्नो प्राथमिकता अनुसार wid विजेट आकारहरू बीच छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाइँ तपाइँको पूरै गृह स्क्रिनमा कब्जा गरेको ठूलो विजेट मनपर्दैन भने, तपाइँसँग सानो विजेट हुन सक्छ। यी विकल्पहरू आईओएस १ update अपडेट अघि उपलब्ध थिएनन्।
एक ब्याट्री विजेट धेरै सरल छ र यसले तपाईंको आईफोन र यसमा जडान भएको अन्य उपकरणहरूको ब्याट्री प्रतिशत देखाउँदछ। तपाईं केही साधारण चरणहरूको साथ एक ब्याट्री विजेट थप्न सक्नुहुन्छ।
गृह स्क्रिन ब्याट्री विजेट थप्नको लागि चरणहरू:
तपाइँको गृह स्क्रिनमा जानुहोस् र कुनै पनि अनुप्रयोगहरूमा वा खाली स्थानमा लामो प्रेस गर्नुहोस्
जब अनुप्रयोगहरू सम्पादन योग्य अवस्थामा हुन्छन् तपाईं मेटाउने विकल्प विकल्प देख्न सक्नुहुनेछ
शीर्ष बायाँ कुनामा, तपाईं + चिन्ह देख्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि विजेट थप्न त्यसमा ट्याप गर्नुहोस्
अब विजेट मेनू खुल्नेछ। ब्याट्री विजेट फेला पार्न तल स्क्रोल गर्नुहोस्
विजेट छनौट गरेपछि, विजेटको पूर्वावलोकन देखाइनेछ र तपाईं आफूले चाहेको कुनै पनि आकारको छनौट गर्न सक्नुहुनेछ
तीन मध्ये एक आकारमा विजेट छनौट गरेपछि, तपाईं गृह स्क्रिनमा विजेट थप्न सक्नुहुन्छ
ब्याट्री विजेट तपाईको होम स्क्रिनमा तपाईको आईफोन खोल्दा देखाइनेछ। तर तपाई घर स्क्रिनमा एक विजेट थप्न यो बेहोश छ जस्तो लाग्न सक्छ। यदि तपाईं ब्याट्री विजेटको साथ होम स्क्रिन भर्न चाहनुहुन्न भने तपाईं यसलाई 'आजको दृश्य' स्तम्भमा थप्न सक्नुहुन्छ। यसलाई थप्न सकिन्छ,
'आजको दृश्य' मेनू खोल्न बायाँ स्वाइप गर्नुहोस्
लामो खाली थिच्नुहोस् र कुनै खाली स्थानमा होल्ड गर्नुहोस्
जब मेनू सम्पादन योग्य हुन्छ, माथिको बायाँ कुनामा अवस्थित + चिन्हमा क्लिक गर्नुहोस्
अब तपाईं 'आजको दृश्य' मा ब्याट्री विजेट थप्न सक्नुहुन्छ
विजेट तपाईलाई जहाँ चाहानुहुन्छ समायोजन गर्नको लागि गृह स्क्रिनमा सार्न सकिन्छ। तर विजेट आकार परिवर्तन गर्न सकिदैन किनकि तपाईं चाहानुहुन्छ options विकल्पहरू बाहेक। त्यहाँ केहि बाह्य अनुप्रयोगहरू छन् जुन फोनमा विकल्प बाहेक ब्याट्री प्रतिशत प्रदर्शन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी अनुप्रयोगहरू App Store मा उपलब्ध छन्।
आईफोन १२ यसको पहिलेको मोडेलहरू र बजारमा अन्य फोनहरूको तुलनामा सबैभन्दा उत्तम सुविधायुक्त मोबाइल फोन हो। निश्चित रूपमा, ब्याट्री स्थिति को नयाँ अद्यावधिक एक परेशानी को एक बिट छ। तर त्यहाँ केहि विकल्पहरू छन् जुन तपाईं विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। साथै जब तपाईं आफ्नो फोन चार्जरमा जडान गर्नुहुन्छ, ब्याट्री प्रतिशत देखाइनेछ। यी बाहेक ब्याट्री जाँच गर्नका लागि कुनै अर्को तरीका छैन। तपाईं स्थिति पट्टिमा जे भए पनि ब्याट्री प्रतिशत गर्न सक्नुहुन्न। त्यसोभए उत्तम विकल्प भनेको माथि उल्लेखित विकल्पहरू मध्ये कुनै पनि रिसोर्ट गर्नु हो।
आईफोन १२ बनाम मिनी बनाम प्रो र प्रो अधिकतम
यूट्यूब तथ्याistics्क (२०२०) - तपाईंलाई थाहा पाउनुपर्ने आश्चर्यजनक तथ्यहरू
आईफोन १२ प्रो मोडेल (A2341, A2406, A2407, A2408)
विन्डोज १० ट्याब्लेटको लागि एन्ड्रोइड इमुलेटर
कसरी अमेजन प्राइम को सदस्यता लिने
म कसरी अमेजन प्राइम फ्री पाउन सक्छु
शीर्ष free नि: शुल्क फिल्म साइटहरू
डाउनलोड गर्न वा दर्ता बिना फिल्म अनलाइन निःशुल्क हेर्नुहोस्
नि: शुल्क xbox प्रत्यक्ष सुन कोडहरू प्राप्त गर्नुहोस्
youtube to उच्च गुणवत्ता mp3